Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 19/09 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri bois ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. - SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva @ 20h tanterahana ao @ Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Isan-telovolana Marseille 25-26/09/2021
Salama, Indro ampitaina amintsika ny programa @ isan-telo volana izay atao any Marseille ny 25 sy 26 Septambra ho avy izao. Araka ny efa voalaza t@ vaovaom-piangonana dia « présentiel » ny Asabotsy sy ny Alahady. Noho izany dia miangavy ireo izay mikasa ny hanatrika any an-toerana mba hampilaza mialoha ny Pastora na ny Filoham-piangonana mba ahafahana mijery izay handaminana azy. Misaotra antsika rehetra. Tahin’i Jesosy Programa isan-telovolana
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 12/09 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri bois ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. Eto an-toerana ny Pastora koa dia hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. - SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Salama Mampandre antsika fa ny fampianarana rahampitso sabotsy 11/09/2021 dia hatomboka amin'ny 7ora sy sasany hariva en ligne Indro ny lien hanatanterahantsika izany https://join.skype.com/brDFBsSfuGdo Tahin'i Jesosy
Salama Hisy fampianarana Soratra Masina ho entin' i Pastora ny asabotsy ho avy izao hanokafana koa ny activité sy ny asa miandry antsika Fiangonana amin'ity taona ho avy ity ka ny bokin'ny Apokalypsy, dia ny Epistily ho any Fiangonana tao Sardisy no hampianarina amin'izany Apokalypsy 3, 1-5 , izay mahafaoka sy hazahoana mampahery antsika Fiangonana koa ao anatin'izao vanim-potoana sy toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao, anasana antsika rehetra izany, kasaina hatao any amin'ny chapelle ny Cup izy io ary hasiana ihany koa ny en ligne. Manantena antsika rehetra tompoko Ho lazaina antsika eo ihany ny ora Tahin'i Jesosy
Miarahaba antsika rehetra. - Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 05/09 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ salle Henri bois ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. - SALOMA : Hanomboka ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. - FIFIL : Hisy ny fotoam-pifohazana ny Sabotsy hariva @ 20h tanterahana ao @ Skype « FLMMontpellier » izay hanasana ny fiangonana rehetra. Ny Tompo anie hitahy antsika.